Fampiasana amin'ny famerenana amin'ny laoniny | Reef Resilience
Ny firafitry ny substraton'ny olona dia mahaliana bebe kokoa ary mampihatra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara. Ny sasany amin'ireo mety ho fiantraikan'ny fiantraikan'ny toeram-piarovana amin'ny vatohara dia:
Manamboatra vato voaendy: Ny firafitra dia afaka mampiorina ny rafitry ny haran-dranomasina any amin'ireo faritra nanimba ny vatoharan-dranomasina na nopetahan'ny fikorontanana (fanjonoana fitrandrahana, fitrandrahana, fidinana an-tsambo). Amin'ny toe-javatra voajanahary, ny haran-dranomasina dia mety haharitra am-polony taona maro vao hiverina na mety tsy ho sitrana ara-dalàna intsony; noho izany, ny famoronana substrate hamerina ny firafitry ny vatohara dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ity fizotry ny fanarenana ity.
Atsaharo ny rafitra ekolojika: Manampy substrate miaraka amin'ny topografia sarotra na sehatra interstitial maka tahaka ny rafitra haran-dranomasina voajanahary izay manome toeram-ponenana ho an'ny trondro sy invertebrata ary mampiroborobo ny fiasan'ny vatohara salama.
Hampitombo ny fanentanana an-tserasera: Tahaka ny harena voajanahary sy ny fomba fambolena, ireo rafitra artificielle (indrindra ireo izay manana hara-pambolena miara-misakafo miaraka aminy) dia afaka mitarika ny fahatakaran'ny daholobe sy ny fanabeazana momba ny toetry ny toeram-ponenan'ny vatohara an-toerana sy ny fomba fiarovana amin'izao fotoana izao.
Ahitsio ny faneren'ny fizahan-tany: Ny sasany tamin'ireo toeram-ponenana dia nanamboatra rafitra izay ampiasain'ireo andriamby mba hialàna amin'ny fialam-boly ary koa hampiofana ireo mpiloka amin'ny fomba fialana azo antoka. Ireo faritra ireo, raha manintona ny mpizaha tany, dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny tsindry amin'ny haran-dranomasina voajanahary izay tafarina na noho ny adin-tsaina.
Manatsara ny jono: Nampidirina ny fananganana trondro ary nampiasaina eran'izao tontolo izao mba hampiroboroboana fisotroan-dronono sy ara-barotra.
Ampitao ny fiarovana ny morontsiraka: Ny tetikasa izay mampitombo ny halaviran'ny haran-dranomasina sy ny hakantony dia afaka mampitombo ny fahafahan'ny haran-dranomasina hanapotehana ny angom-pahefana ary hiaro ny morontsiraka amin'ny tafio-drivotra sy ny fipoahana. Ireo tombontsoa ireo dia manan-danja amin'ny olona izay mora voadona amin'ny tondra-drano sy ny fanodinana. Izy ireo ihany koa dia manan-danja amin'ny fiarahamonim-pirenena voajanahary satria miaro ny haran-dranomasina avy amin'ny voka-dratsin'ny rivo-doza (loharanom-pahafatesana lehibe indrindra amin'ny GBR). ref Amin'ny fampihenana ny angovo angovo, ireo rafitra dia mampitombo ny fahombiazan'ny haran-dranomasina hafa sy tetik'asa fananganana mangatsiaka (ie, ny tetikasa famerenana ny ala honko dia matetika tsy mahomby satria ny haavon'ny angona dia avo loatra).
Coral reefs ho an'ny fiarovana sy ny fanatsarana ny toetrandro
Ny haran-dranomasina dia hantsana voajanahary mahomby izay manaparitaka ny angovo onja sy ny fikaohon-tany taty aoriana. Ny fandalinana vao haingana dia nahatsikaritra fa ny haran-dranomasina dia mampihena ny angovo onja amin'ny 97% ary ny haavon'ny onja amin'ny 84% amin'ny salanisa. Ny tampon'ny haran-dranomasina dia toa faritra mahomby indrindra amin'ny haran-dranomasina amin'ny fampihenana ny angovo onja. Ny fikorontanan'ny olombelona sy ny fiovaovan'ny toetrandro izay manimba ny haran-dranomasina dia nampihena ny halehibeny sy ny fahasarotany, nahatonga ny fisian'ny fari-dranomasina marobe. Noho izany, ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny fampiasana substrate fanampiny dia mety ho tetikady mahomby amin'ny fampiroboroboana ny firafitry ny haran-dranomasina sy ny fampihenana ny loza ateraky ny morontsiraka amin'ny isan'ny olombelona.
Ireo rafitra fantsom-bozaka manify dia afaka mampihena ny fihoaram-pahefana mahery vaika ary mahomby amin'ny fananganana toeram-ponenana an-dranomasina, siramamy amin'ny vatohara, ary ala korana. Sary © Tim Calver
Ny fampitomboana ny tombontsoa ara-bola dia azo atao amin'ny tetikasa famerenana amin'ny asa momba ny harena an-kibon'ny tany izay manokana ny fiarovana ny morontsiraka, ny fampifanarahana ny toetrandro, ary ny fampihenana ny loza. Ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny Coral dia lafo kokoa noho ny rafitra fiarovana, ary raha salama dia hamboly haran-dranomasina ho avy ary hihazona ireo tombontsoa amin'ny fiarovana ny morontsiraka. ref Ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara miaraka amin'ny rafitra dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny fitantanana mahomby izay mampihena ny faneriterena eo an-toerana sy maharitra amin'ny haran-dranomasina. Ireto ambany ireto ny zava-misy momba ny tombontsoa azon'ny olona avy amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fiarovana ny morontsiraka izay azo ampiasaina hanohanana ny famerenana amin'ny laoniny ny famerenana amin'ny laoniny:
Ny vatoharan-dranomasina dia manome ny fiarovana voalohany amin'ny olona 63 tapitrisa manerana ny tany mipetraka any amin'ny faritra amoron-tsiraka sy ambany ref
Ny vatoharan-dranomasina dia miaina fialofana izay manome fiarovana amin'ny onja sy oram-batravatra mihoatra ny 150,000 kilometatra amoron-dranomasina tropikaly any amin'ny tany 100 ref
Any amin'ny firenena toy ny Bahamas, Maldives, Solomon Islands, ary Fiji, modely ara-tsiansa dia manolotra fa mihoatra ny antsasaky ny mponina dia mandray soa avy amin'ny fiarovana ny morontsiraka izay omen'ny haran-dranomasina ref
Manodidina ny 200 tapitrisa ireo olona mandray ny fiarovana ny morontsiraka amin'ny haran-dranomasina dia afaka miteraka saran-dàlana manan-danja raha harodana ny vatohara. ref
Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 40% amin'ny mponina manerantany no miaina ao anatin'ny 100 km ny morontsiraka, miaraka amin'ity isan-jato eo amin'ny fiakarana ref
Ny Atlas of the Wealth of the Ocean dia manome fitaovana matihanina matanjaka izay azon'ny mpitantana ampiasaina hanehoana ny habetsahan'ny olona, ​​ny vola amin'ny tany, ary ny faritra dia miaro amin'ny haran-dranomasina, ary ny fomba amam-pitaovan'ny artificielle dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny morontsiraka.
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Ny fihenan'ny famotsoran-keloka 27 amin'ny Corolla lehibe momba ny harambato fisaka lehibe sy ny antony manokatra fisie PDF